Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3207	Days	02	Hours	26	Minutes	36	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Articles	MAANTA IYO XAALADA WAQOOYIGA SOOMAALIYA Maamulka Isaqland way ku guul dareysteen sanaadiiqdii ay rabeen iney ku khalkhal geliyaan nabada dhulka Maakhir iyo Dhulbahantaha ee Puntland. Maamulka Isaqland iyo dabadhilifyada tirada yar ee macaanjecesha ah ee u adeegaa waa iney ogaadaan in aaney wax ka qaadin karin dadka Reer Maakhir iyo Dhulbahantaha dega Waqooyiga oo diiday gunnimada hoos taga Isaqland oo doortay gobanamida la noolashaha reer tolkooda Puntland, wax kasta ah isku qabeene. Isku Duubni Baa Dadkayagow
Siyaasiyiintaa xornimo ayaanu rabnaa ku yidhi Ingiriiska ma laheyn awood ay ku joojiyaan ama baxaan heshiisyadii qabaa'ilka lala galay, maadaama aaney iyagu saxiixin. Wasiirkii Isticmaarku wuxu amray kuwii metelayey "Somaliland' in ay soo caddeeyaan waxa qabaa'ilku rabaan si heshiiskaasi meesha uga baxo. Markii siyaasiyaantii dib loo soo celiyey iyadoo taa shardi lagaga dhigayo ayaa Odayaashii heystay awooda saxiixu caddeeyeen in aaney rabin Xornimo iyo dawlada "Somaliland" la yidhaahdo oo keliya laakiin ay rabaan xornmimo iyo Dawlada Soomaaliyeed oo mideysan(Independence and Union With Somalia). Maamulka Isaqland ee Hargeisa marin habaabinta uu wado oo ah in xorrnimada lagu helay wax la yidhaadho "Somaliland" oo xor u noqatay iney keligeed istaagto oo markaa "Italian Somaliland" lala midowday waa mid ka hor imaneysa xaqiiqada sharciga ah ee maanta caalamka meel kasta taala oo ah in wax "Somaliand" la yidhaadho aaney weligeed si cad xorriyad uga qaadan Ingiriiska iney noqoto dal madaxbanaan. Arrinta beenta ah ee Isaqland sheego oo ah waa nala aqoonsaday iyada adduunku waa la yaabaa beenta iyo indha-adayga ay aqoonsiga ku raadsanayaan maadaama ay meel kasta yaaliin caddeymaha muujininaya sidii xornimada loo siiyey qabaa'ilkii deganaa Waqooyiga iyo in aaney jirin cid weligood aqoonsatay; tahniyadihii meelaha qaar ay u soo direen qab'aailkaa Soomaaliyeed ee xorriyadoodii ku helay iney la midoobaan "Italian Somaliland" ayey ka dhigaan mid lagu aqoonsaday. Ma oga in aaney adduunka khaldin karin oo ay u fiican tahay iney xaqiiqda sheegaan hadday wax aan soconeyn xitaa raadsanyaan.
Waxay kaloo Ardaaga Odayaasha Warsangeli xilligaa dalbadeen in aan heshiiskoodu noqon mid furan oo suldaanada isbedelayaa dhaxlaan. Waxay diideen odhaahda qabaa'ilka kale oo dhan heshiisyadooda la raaciyey oo ah in iyaga iyo kuwa ay sii dhalaan oo dhulka dhaxli doonaa ay khasab ku tahay iney ilaaliyaan heshiiskaa waa ” their heirs and successors .”
ARTICLES I, II and III are removed from the Warsangali Treaty. ARTICLE III in the Warsnagali Treaty is similar to ARTICLE II in HABR GERHAJIS and Habr Toljaala Treaty but it doesn't contain "All vessels under the British flag shall have free permission to trade at all ports and places within …"
Dhismaha sawirkan hoose waa magaala xeebeedka Laas Qoray. Dabaqyadan aad arragto waxay ka mid yihiin dhismayaasha taariikhiga ah. Maamulka Saldanada Maakhir, halka dawladaha adduunku leeyihiin "Villa Somalia" iyo "White house", xilligaa waxa "Guriga Cad" ee Warsangeli loo yaqaaney SHAACA. Magaca SHAACA ee goobta gudoonka ka dhacayo loo yaqaaney waxay ku tusinaysaa deganaanta maamulka Ardaaga Odayaasha Warsagengeli iyo gudoonkooda. Waxay muujineysaa in Reer Maakhir ka gudbeen xilli ay geed hoos fariistaan oo wada-tashigooda ku qabsadaan oo gaadheen iney dhistaan dabaqyo ay arrimahooda kaga wada hadlaan oo uu maamulkoodu ka soo baxayo sida "Guriga Cad" iyo "Villa Somalia." Halka Soomaaliya guriga looga taliyaa, waa "VILLA SOMALIA", xambaarsan yahay macne guumeysi Talyaani muujinaya kan Reer Maakhir looga talin jiray wuxuu xambaarsanaa bandiirad xornimo iyo gumeysi la'aan ku saleysan macne qoto dheer iyo ujeedo culus oo ah nuurkii caddaalada iyo golahay sinaantu ka soo shaaceysey ama iftiimeysey. Sidaasaa Saldanada Maakhir goobta Odayaasha Ardaaga Warsangeli iyo Gudoonkoodu talada ku goyn jireen loogu bixiyey "SHAACA" oo ah "Guriga Cad" ee Maakhir. Waraaqihii ay Isweedaarsadeen Garaad Cali Shire iyo Ingriiska 1902
Maanta ayaa Isaqland iyo Hargeysa rabtaa, wax boqortooyadaa Ingiriisku aaney isku dayin, iney Maakhir ka sameeyaan. Waxay Isaqland rabaan iney caada-qaatayaal shilimaad Hargeysa ka soo baryey oo metelaya soo geliyaan dhulka Maakhir. Lagama yeeli doono taa. Dabaqyadii Laas Qoray